China Yepamberi Inodzora Copper Foil Tepi fekitori uye vagadziri | Newera
Chinhu maficha uye mashandisiro Code Kuita
Kutsigira Namira foil ukobvu (mm) namira ukobvu（mm） Elongation% 180°peel simba N / 25mm Tack Rolling Bhora cm Tembiricha yebasa °C kuramba kwemagetsi
vasina kuitisa yemhangura foil tepi iyo yemhangura foil sechinhu chakatsigirwa, chakaputirwa neacrylic acrylic yekumanikidza-inonamira. Zvishandiso: inonyanya kushandiswa kubvisa electro-magnelic kupindira EML, kusanganisa kukuvadzwa kweiyo electro-magnetic wave kumuviri wemunhu.Iyo inonyanya kushanda kune komputa yekunze waya zvigadzirwa, komputa kuratidza, shanduri vagadziri.Dhiviri mativi conductive mhando inowanika. xsd-scpt yemhangura foil acrylic 0.018mm-0.075mm 0.03mm-0.04mm 14 18 12 -20 ~ + 120 0Ω
kaviri conductive mhangura foil tepi xsd-dcpt yemhangura foil acrylic 0.018mm-0.075mm 0.03mm-0.04mm 14 18 12 -20 ~ + 120 0.04Ω
Insulation, kupisa kuputira, isina mvura, yakanaka kunamatira, inogona kubvisa magetsi emagetsi, kupatsanura kukuvara kwemagetsi emagetsi kumuviri wemunhu, kudzivirira voltage kana yazvino kukanganisa basa.
Inokodzera kugadzirwa kwemuchina wakasiyana siyana, mawaya, majeki uye mota, pamwe nemabasa akakosha ekudzivirira hozhwa nezvimwe zvipembenene.
Mhangura tepi inoreva tambo yakatetepa yemhangura, kazhinji inotsigirwa neanamatira. Mhangura tepi inogona kuwanikwa pazvivakwa zvehardware uye zvekurima gadheni uye dzimwe nguva zvitoro zvemagetsi. Mhangura tepi inoshandiswa kuchengetedza slugs uye hozhwa kunze kwenzvimbo dzakati mumabindu, zvirimwa zvine potted, uye hunde dzemiti yemichero, nemimwe miti nemakwenzi. Iyo inoshandiswawo kune mamwe mashandisirwo, senge magetsi emagetsi anodzivirira kana yakaderera-yepamusoro peiri gomo rekutapurirana mumagetsi uye mukugadzirwa kwemarambi etiffany. conductive inonamira uye isiri-inoitisa inonamira (inova inowanikwa).
Pashure: Kaviri Inoitisa Mhangura Foil Tepi
Zvadaro: PVC Yemagetsi yekuisa tepi
YeMhangura Foil Inodzivirira Tepi
yemhangura foil tepi
YeMhangura Yekumusoro Tepi Ine Inodzora Yekunamatira
Kaviri Akatenderedzwa Anodzora Copper Foil Tepi